Bit By Bit - Ethics - 6.1 Okwu Mmalite
Isiakwụkwọ ndị gara aga egosila na afọ dijitalụ na-emepụta ohere ọhụụ maka ịnakọta ma nyochaa data mmadụ. Oge dijitalụ emeela ka ọ bụrụ ihe ịma aka ọhụrụ. Ihe mgbaru ọsọ nke isi nke a bụ inye gị ngwá ọrụ ị chọrọ iji dozie nsogbu ndị a.
E nwere ugbu a ejighị n'aka banyere àgwà kwesịrị ekwesị nke ụfọdụ nchọpụta mmekọrịta dị iche iche nke dijitalụ. Nke a ejighị n'aka emeela ka nsogbu abụọ metụtara ya, nke otu n'ime ha natachara anya karịa nke ọzọ. N'aka nke aka, a na-ebo ụfọdụ ndị nchọpụta ebubo na ha na-emebi ndị mmadụ ma ọ bụ ndị na-edebanye aha na ndị na-emeghị nchọpụta. Ihe ndị a-nke m ga-akọwa n'isiakwụkwọ a-bụ isiokwu nke arụmụka na mkparịta ụka dị ukwuu. N'aka nke ọzọ, enweghị mgbagwoju anya nke ọma na-enwekwa mmetụta dị egwu, na-egbochi nchọpụta dị mma na nke dị mkpa ka ọ na-eme, eziokwu nke m na-eche na ọ bụ ihe na-abachaghị uru. Dịka ọmụmaatụ, n'oge ntiwapụ Ebola nke afọ 2014, ndị ọrụ ahụ ike ọha na eze chọrọ ozi gbasara ọhụụ nke ndị mmadụ na mba ndị kachasị emetụta ọrịa iji nyere aka ịchịkwa ntiwapụ ahụ. Ụlọ ọrụ ndị na-eji ekwentị mkpanaaka nwere nkọwa ndekọ zuru ezu nke nwere ike inye ụfọdụ ozi a. Ma nchegbu nke iwu na iwu na-agbadata mgbalị ndị nchọpụta mere iji nyochaa data (Wesolowski et al. 2014; McDonald 2016) . Ọ bụrụ na anyị, dị ka obodo, nwere ike ịzụlite ụkpụrụ omume na ụkpụrụ ndị ma ndị na-eme nchọpụta na ndị mmadụ na-ekerịta - na echere m na anyị nwere ike ime nke a - mgbe ahụ, anyị nwere ike ijikwa ike nke oge dijitalụ n'ụzọ ndị na-arụ ọrụ na ndị bara uru ọha mmadụ .
Otu ihe mgbochi nke ịmepụta ụkpụrụ ndị a dị na ya bụ na ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta sayensị na-enwekarị ụzọ dị iche iche iji chọpụta ụkpụrụ omume. Maka ndị ọkà mmụta sayensị, ndị na-eche echiche banyere ụkpụrụ omume na-achịkwa Boards Board Review (IRBs) na ụkpụrụ ndị a na-ejide ha. A sị ka e kwuwe, nanị otu ụzọ ndị ọkachamara na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe na-enwe na-arụrịta ụka n'ụzọ ziri ezi bụ site n'usoro iwu ọchịchị nke IRB. Ndị ọkà mmụta sayensị, n'aka nke ọzọ, enwechaghị ahụmịhe azụmaahịa na ụkpụrụ nyocha n'ihi na a naghị ekwukarị ya na sayensị na injinịa kọmputa. Ma ndị a na-eru nso-iwu dabeere obibia nke na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ ndị ad hoc obibia nke data ndị ọkà mmụta sayensị-dị mma ruru eru na-elekọta mmadụ nchọpụta na digital afọ. Kama nke ahụ, ekwenyere m na anyị, dị ka obodo, ga-enwe ọganihu ma ọ bụrụ na anyị na-agbaso ụkpụrụ usoro iwu . Nke ahụ bụ, ndị na-eme nchọpụta kwesịrị ịtụle nyocha ha site na iwu ndị dị ugbu a-nke m ga-ewere dịka e nyere ma chee na a ga-agbaso- na site na ụkpụrụ ụkpụrụ omume ndị ọzọ. Ụkpụrụ a na-enyere ndị nchọpụta aka ime mkpebi ziri ezi maka ikpe na-edebeghị iwu, ọ na-enyekwara ndị na-eme nchọpụta aka ikwurịta echiche ha n'etiti onwe ha na ọha mmadụ.
Ụkpụrụ ndị dabeere na ụkpụrụ nke m na-ekwu okwu abụghị ihe ọhụrụ. Ọ na-adọta ọtụtụ iri afọ nke echiche ndị gara aga, ọtụtụ n'ime ha na-eti mkpu na akụkọ abụọ dị ala: Belmont Report na Report Menlo. Dị ka ị ga-ahụ, n'ọnọdụ ụfọdụ, ụkpụrụ ndị dabeere na ụkpụrụ na-eduga ná ngwọta doro anya, ihe ngwọta. Na, mgbe ọ na-ebuteghị ngwọta ndị dị otú a, ọ na-akọwa ndị ahịa, gụnyere nke dị oke egwu maka ịpịpụta ihe kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, ụkpụrụ ndị dabeere na ụkpụrụ zuru oke n'ozuzu na ọ ga-enye aka n'agbanyeghị ebe ị na-arụ ọrụ (dịka, mahadum, ọchịchị, NGO, ma ọ bụ ụlọ ọrụ).
A haziri isiokwu a iji nyere onye na-eme nchọpụta nke nwere ezi uche aka. Kedu ka ị ga-esi chee echiche banyere omume ọma gị? Kedu ihe ị ga - eme iji mee ka ọrụ gị dịkwuo mma? Na nkeji nke 6.2, m ga-akọwa ọrụ atọ nyochaa afọ iri na ụma nke meworo arụmụka banyere arụmụka. Mgbe ahụ, na mpaghara 6.3, Agaghị m ahụhụ ihe atụ ndị a ka m kọwaa ihe m chere bụ isi ihe kpatara ejighị n'aka nke ọma: ike n'ike n'ike maka ndị na-eme nchọpụta iji hụ ma na-anwale ndị mmadụ n'enweghị nkwenye ma ọ bụ ọbụna ịma. Ike ndị a na-agbanwe ngwa ngwa karịa iwu, iwu, na iwu anyị. Ọzọ, na nkebi nke 6.4, m ga-akọwa ụkpụrụ anọ dị ugbu a nke pụrụ iduzi echiche gị: Ịkwanyere Ndị Mmadụ, Uru, Ikpe ziri ezi, na Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ. Mgbe ahụ, na mpaghara 6.5, m ga-achikota usoro okwu abụọ dị elu-njedebe na deontology-nke nwere ike inyere gị aka na otu n'ime nsogbu kachasị ike ị ga - eche ihu: mgbe mgbe ọ ga - adị mma ka i jiri ụzọ dị ịtụnanya na - njedebe nke ọma. Ụkpụrụ ndị a na ụkpụrụ omume ọma-nke a chịkọtara na nọmba 6.1-ga-enyere gị aka ịkwaga karịa ilekwasị anya n'ihe iwu ndị dị ugbu a na-eme ka i nwekwuo ikike ikwurịta okwu gị na ndị ọzọ na-eme nchọpụta na ọha na eze.
Na mpaghara 6.6, m ga-atụle ebe anọ kachasị sie ike maka ndị na-eme nchọpụta na-elekọta mmadụ afọ ole na ole: nkwenye a na-enye ya (ngalaba 6.6.1), nghọta na ijikwa ihe ọmụma dị egwu (ngalaba 6.6.2), nzuzo (ngalaba 6.6.3 ), na ime mkpebi ndị ezi uche na-adịghị na ya n'ihi enweghị mgbagwoju anya (ngalaba 6.6.4). N'ikpeazụ, na mpaghara 6.7, m ga-enye ndụmọdụ atọ bara uru maka ịrụ ọrụ na mpaghara nwere ụkpụrụ omume na-enweghị atụ. Isi nke a na-agwụ site na ihe odide akụkọ ihe mere eme, ebe m na-achịkọta nchịkọta nke nlezianya nke nlezianya nyocha na United States, gụnyere mgbakasị nke akwụkwọ edemede Tuskegee Syphilis, na Belmont Report, Usoro Iwu, na Report Menlo.
Onyonyo 6.1: Iwu ndị na-achịkwa nchọpụta na-esite na ụkpụrụ ndị sitere n'aka ụkpụrụ omume. Ihe iseokwu nke isi nke isi a bụ na ndị nchọpụta kwesịrị ịtụle nyocha ha site na iwu ndị dị ugbu a-nke m ga-ewere dịka e nyere ma chee na a ga-agbaso ya - na site na ụkpụrụ ụkpụrụ omume ndị ọzọ. Iwu Ochie bụ usoro iwu nke na-achịkwa ọtụtụ ntinye ego na United States (maka nkọwa ndị ọzọ, lee ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme na isi nke a). Ụkpụrụ anọ ahụ sitere na ogwe aka abụọ na-acha anụnụ anụnụ nke e kere iji nye nduzi nduzi na ndị nchọpụta: Belmont Report na Menlo Report (maka nkọwa ndị ọzọ, lee ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme). N'ikpeazụ, njirimara na deontology bụ ụkpụrụ omume nke ndị ọkà ihe ọmụma mepụtara kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ụzọ dị ngwa na n'ụzọ dị iche iche iji mara ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ bụ na ndị na-atụgharị anya na-elekwasị anya na ndị na-eme ihe na-elekwasị anya na njedebe.